मलेसियाको खुला पार्कको छाप्रोमा अलपत्र नेपाली आमा छोरा ! उद्धारको लागि अपिल – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/मलेसियाको खुला पार्कको छाप्रोमा अलपत्र नेपाली आमा छोरा ! उद्धारको लागि अपिल
मलेसियाको खुला पार्कको छाप्रोमा अलपत्र नेपाली आमा छोरा ! उद्धारको लागि अपिल
सपना वस्याल/मलेशिया । मलेशियाको पार्कमा अलप,त्र सविना र उनको चार वर्षे छोराको उ,द्दार पहलमा सहयोगको अ,पिल गरिएको छ । आफ्नो नाम सविना राई (कट्वाल) वताउने अन्दाजी ३८ वर्षकी नेपाली महिला आफ्नो ४ वर्षको छोरा सहित विगत ६ महिनादेखि मलेशियाको एक पार्कमा अलप,त्र अवस्थामा छिन् । उनीराजधानी क्वालालम्पुर नजिकै रहेको सुवाङ्गको, ग्लेनमरी भन्ने ठाउँको सार्वजनिक पार्कमा अलप,त्र रुपमा रहेकी छिन् ।
सविना आफ्नो छोरा सहित वोराले वारेको छाप्रोमा विगत ६ महिनादेखि अत्यन्त दयनिय अवस्थामा बसेकी छिन् । सविना र उन्को छोरालाई उ,द्दार गर्न मलेसियामा भएका नेपालीहरुबाट पहल भएपनि अहिले सम्म उनीहरूको उ,द्दार गर्न सकिएको छैन । सविनाको मा,नसिक अवस्थामा केहि अस,न्तुलन भएको अ,ड्कल उनलाई भेटी घर फर्काउन सहयोग पहल गरी रहेकी, गैरआवासीय नेपाली संघ, मलेशियाकी महिला उपाध्यक्ष शु,भद्रा कुमारी लि,म्बूले बताईन् ।
लिम्बूका अनुसार गएको महिना केही नेपालीहरुले सविना र उनको छोरालाई नेपाली रे,ष्टुरामा लगेर राखिएको थियो । तर उनी त्यहाँ बस्न नमानेर फेरी उक्त पार्कमा छोरा लिएर फर्किएर आईन् । उनको नेपालमा भएका आफन्त र गाउँलेजन सम्पर्कमा आउन लिम्बुले यसै समाचार मार्फत आग्रह गरेकी छिन् ।
सविनाले लिम्बूलाइ वताएअनुसार, उनको आफ्नो घर नेपालमा ओखलढुङ्गा पात्ले गाउँ वडा नं ७ हो र बुवाको नाम विष्णु बहादुर राई हो । उनी पाँच बर्ष पहिले बैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियाको जोहोरवारु स्थित एक कम्पनीमा आएकी थिइन् । पछि सविना कम्पनीबाट निस्कीएर रेष्टु,रामा काम गरेकी थिइन् । उनले त्यही समयमा छोरा ज,न्माएकी हुन् ।
छोराको बाबुको वारेमा सविनालाई धेरै हेक्का नभएको र उनले नै मागेर छोराको हेरविचार गरीरहेकी छन् । उनको नेपालमा पहिलो विहेबाट करीब अठार, उन्नाईस वर्षकी छोरी पनि रहेको बुझिएको छ ।
“सविनाको साथमा कुनै पनि परिचय पत्र छैन, पैसा लिन पनि मान्नुहुन्न र आमा छोरा यहि संगै बाच्छौं र संगै मर्छाै भनेर भनिन् । मेरो मन भ,क्कानिएर आयो ।” लिम्बूले भनिन् ।
“खुला पार्क निर गाडि राख्न आउनेले केहि खाना दिँदा रहेछन् नभए आमा छोरा भोकै वस्दा रहेछन् । अनि कहिलेकाही राति केहि मानिसले आएर ध,म्काउने तर आफुले साथमा राखेको ह,तियार देखाएर ज्या,न जो,गाएको कुरा गरिन् । परदेशमा नेपाली चेलि र उनको अ,वोध बालकको यो विजोग देख्दा अत्यन्त दुखित छु, आशा गर्रौ उनि छिट्टै घर फर्कन पाउँने छन् ।”, लि,म्बूले बताइन् ।
लि,म्बूका अनुसार सविनालाई पहिला उ,पचारको खाँचो छ । सविनामा आफ्नो र छोराको ज्या,नको सु,रक्षा गर्नु पर्छ र नेपाल जानु पर्छ भन्ने चेतना छैन । सविना र उनको अवोध बालकको जिवन ख,तरामा छ । यो अवस्थामा उनलाई खुल्ला पार्कमा छाड्नु नहुँने र उनको उ,द्दार सकेसम्म छिटो गर्नु पर्नेछ ।
सहयोगी लिम्बूले सम्वन्धित सबै निकायमा सहयोगको अपिल गरेकी छिन् । सविनाका आफन्त वा चि,न्नुहुनेले नेपाली राजदुतावास मलेसियाको दुतावासको सम्पर्क न. ०३–२०२०१८९८ वा उपाध्यक्ष शुभद्रा कुमारी लिम्बूलाई ०३–२०७२०६६३, +६०१०२०२८०१३ मा तु,रुन्त सम्पर्क गर्न आ,ग्रह गरेकी छिन् ।
खेत जोतेर फर्किदै गर्दा आफैँले चलाएको ट्र्याक्टर दु’र्घट’ना’मा परि नेकपा नेताअधि कारीको नि’धन
पाथिभरा माताले सबैको रक्षा गरुन, पौष १३ गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
कुरा गरिरहेकै समयमा मोबाइल फोन विस्फोट हुँदा युवकको मृत्यु
सुस्मिताबारे पहिलोपटक खो’ ले रह, स्य, सानैदेखी यत्ति ज्ञानी रहिछन्, कार उप हार दिन पाईनन् आमाबुवालाई(हेर्नुहोस् भिडियो)
प्रहरीका हाकिमले अपरा’धीसँग मिलेर आफ्नै ८ पुलिसको ह’त्या गराएकाे खुलाशा! (भिडियो हेर्नुस्)